काठमाडौं, वैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक शुरु भएको छ । उक्त बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले जानकारी दिएका छन् । हिजो मंगलबार नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको छलफलपछि सचिवालयको समय तय भएको हो । यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री […]
पूर्व सभामुख महराको साथ पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई
काठमाडौँ, बैशाख १७ । पूर्व सभामुख तथा नेकपाका सांसद कृष्णबहादुर महराले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने संकेत दिएका छन् । पार्टीभित्रैबाट ओलीको राजीनामा माग्ने तयारी भैरहेको अवस्थामा महरा ओलीको पक्षमा उभिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । आज एउटा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै महराले महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले अहिले विश्व आक्रान्त […]
प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन
१७ वैशाख, काठमाडौं । अध्यक्ष पद नछाडे प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने तयारी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष समेत रहेका ओली पक्षले संसदीय दलमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन संघीय संसदका सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो । सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधवार […]
प्रधानमन्त्री ओली किन पुगे संसद भवन ?
बैशाख १७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको अवलोकन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठक सञ्चालनका लागि कसरी सामाजिक दुरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर अनुगमनका लागि संसद भवन पुगेका हुन् । अनुगमनमा प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलगायत उपस्थित थिए ।
यसकारण रोकियो ओलीविरुद्धको हस्ताक्षर अभियान
१७ वैशाख, काठमाडौं । नेताहरूको निरन्तर दौडधुप र अनौपचारिक संवादपछि नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार अपराह्न बस्ने तय भएको छ । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको बेग्लाबेग्लै संवादपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार करिब दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महासचिव […]
ओलीका यी पाँच प्रस्ताव जसलाई माधव नेपालले गरे अस्वीकार
१७ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा शीर्ष नेताहरु आफू पक्षधर सांसदलाई आफ्नै पक्षमा टिकाइराख्ने कसरतमा जुटेका छन् । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफू पक्षका सांसदलाई जोगाउने कसरतमा लागेका हुन् । दुई दिनसम्म नेपाल समूहसँग भएको […]
नेकपा सचिवालय बैठक आज साँझ बालुवाटारमा बस्दै
काठमाडौं, वैशाख १७ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज बुधबार साँझ बस्दैछ । बैठक बेलुका ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको हो । हिजो मंगलबार नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको छलफलपछि सचिवालयको समय तय भएको हो । यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र माधव […]
नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि बुधबार बस्ने
१६ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक भोलि बुधबार बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज भेटवार्ता भएपछि भोलि बुधबार सचिवालय बैठक भोलि साँझ ५ बजे बोलाउने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच झण्डै १ घण्टा […]
सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा पनि अपहरणको मुद्धा जाहेरी लिन अस्वीकार
१६ वैशाख, काठमाडौं । महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौंले अपहरणको जाहेरी लिन नमानेपछि नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरु आफ्ना सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरणको जाहेरी लिएर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ पुगेका थिए । उनीहरु सरकारी वकिल कार्यालयमा बसेर दुई घण्टा लामो छलफल गरेपनि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख हरिप्रसाद रेग्मीले अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्न नमानी […]
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता
१६ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता जारी रहेको छ । पार्टीभित्र देखिएको गतिरोध हटाउनको लागि दुई अध्यक्ष बीच सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठक बोलाउनेबारे छलफल हुने स्रोतले बताएको छ । यसअघि पार्टीका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले स्थायी […]
नेपाल पक्षसँग हात मिलाउने कसरतमा ओली, सम्भव होला त ?
बैशाख १६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले सिर्जना गरेको समस्याको समाधान निकाल्न नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कुनै न कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ । वर्तमान अवस्थालाई सुरक्षित अवतरणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग सहकार्य र सम्झौता आवश्यक रहेको हो । केही समययता तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहे पनि समस्या समाधान गर्न सत्तारुढ दलभित्र यस्तो अवस्था निम्तिएको हो […]
काठमाडौँ, १५ वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उहाँका चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच हाल विद्यमान विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँबारे विचार आदानप्रदान भएको छ । उहाँहरुबीच आज साँझ भएको टेलिफोन संवादमा विश्वले अनुभव गरेको यसको प्रभाव र दुवै देशका सकारहरुले यसविरुद्ध चालेका उपायहरुबारे पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले […]
नेकपाका नेताहरुको अनौपचारिक छलफल, भोलि मंगलबार सचिवालय बैठक
काठमाडौँ, १५ वैशाख । पछिल्लो समयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको आन्तरिक विवाद मिलाउन नेताहरुबीचको अनौपचारिक छलफलले तीव्रता पाएको छ । पार्टीका २० स्थायी कमिटी सदस्यले सरकार र पार्टी नेतृत्वको समीक्षाका लागि तत्काल स्थायी कमिटी बैठकको माग गरिरहेका बेला समाधानका लागि शीर्ष नेताका साथै मध्यमार्गी अन्य नेताहरुको पनि सक्रियता देखिएको हो । नेताहरुको […]
गृह मन्त्रालयद्वारा अलपत्र परेका यात्रु ओसारपसार रोक्न निर्देशन
१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले अलपत्र परेका यात्रु ओसारपसारमा रोक लगाएको छ । उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाबाट आफ्नो स्थायी थातथलो जाने यात्रुलाई स्थानीय तहबाट गरिँदै आएको उद्धार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको गृहमन्त्रालयका सह-प्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै अत्यावश्वय सेवा बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन […]
कोरोना प्रतिकार्यमा कर्णाली सरकारको उचित कदम : शर्मा
सुर्खेत, १५ वैशाख । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज जनार्दशन शर्माले कोभिड–१९ को प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले राम्रो कदम चालेको बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसँग प्रदेश सरकारको कामकारवाही र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा आइतबार भएको भर्चुअल बैठकमा इञ्चार्ज शर्माले हालसम्म प्रदेश सरकारले सह्रानीय काम गरेको बताउनुभएको हो […]
लकडाउन खुकुलो पार्न राप्रपाको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, १४ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विज्ञको रायसल्लाह लिएर प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी क्रमशः लकडाउन खुकुलो गर्दै लैजानेबारे उपयुक्त रणनीति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । राप्रपा अध्यक्षत्रयको उपस्थितिमा आज बसेको परामर्श बैठकले स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल आपूर्ति गरी स्थानीय तहसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्न, परीक्षणको दायरा र गति व्यापक तुल्याउन तथा ज्यालादारी एवं न्यून आय […]
२५ वैशाखसम्म लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको निर्णय
१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले लकडाउनलाई वैशाख २५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । आज बेलुकी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारले जारी लकडाउन १० दिन थप्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख १५ गतेसम्मको लकडाउन अब वैशाख २५ गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा कोरोना […]
सर्वोच्चको निर्णय – संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने
१४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आफ्नो यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको छ । ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने ठहरसहित निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो । यसअघिको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हुनुपर्ने भनी फैसला गरेको थियो । लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका […]
काठमाडौं प्रहरीले सुरेन्द्र यादव अपहरण सम्बन्धी उजुरी लिन मानेन
१४ वैशाख, काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसहित सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरु काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेपनि प्रहरीले उजुरी लिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार दिउँसो आफ्नो पार्टीका सांसद सुरेन्द्र […]
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भन्छन् – नेकपाकाे नाममा चलखेल गर्नु लज्जाशरणम् !
१४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले काेरोनाका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय संकटविरूद्द जुधिरहेकाे र सफल ढंगले काम गरिरहेकाे सरकारलाई घेराबन्दी गरेर स्थिरताविरूद्द जारी नेकपाकाे नाममा चलखेल गर्नु लज्जाशरणम् भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै पार्टी एकता र त्यसपछिका सहमतिहरू उल्लंघन गर्दै षड्यन्त्र र छलछामहरू गर्ने […]